Namuhla sizoxoxa kanjani ukuba acatshangelwe dragon iqanda "Maynkraft". Wabasaqalayo Iningi le yonke Kuyaziwa ukuthi phakathi umdlalo ongazithola into ecacisiwe. Lapho usebenzisa i-Mods kungenziwa ukuze ukukhanya uvele dragon siqu. Ngenxa yalesi sizathu, iningi abadlali bafuna ukuthola ukuthi ukwenza amaqanda izikebhe endaweni yonke yalo mdlalo. Ukuze bezibona enembile ukuchaza zonke izigaba nqubo besebenzisa i-algorithm.
Uma udinga ukuthola e Minecraft dragon Iqanda kwasekuqaleni ke Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi ukuze kuqaliswe ukusebenza ezihlelelwe udinga ukuthola futhi ayinqobe imiphetho ohambelana we umhlali. Ukuze uthole ubukhulu ecacisiwe kufanele ukwakha portal ekhethekile. Ukuze anqobe udrako, udinga ukuba silungiselele kahle. Ukuze uthole impi yimpumelelo, uzodinga umnsalo umcibisholo ukuqhuba zazisuka futhi idayimane inkemba Melee. The hero kumele ivikelwe zempi eziqinile.
Ukuze ukuxazulula le nkinga njengoba acatshangelwe dragon iqanda anqobe silo, kuzomele uqale ukubhubhisa sakhiwo esasibizwa zitholakala imithombo yokutakula yempilo yakhe. Ngemva kwalokho amathuba luyanda kakhulu. Isikhali okuwusizo kunakho konke ngoba impi ne ezinamaphiko mob-boss iyokhothama.
Siphendukela umbuzo kanjani ukuba acatshangelwe dragon egg. Ngemva umdlali linqoba silo okubi engxenyeni engenhla portal, okuyinto i okukhiphayo kusukela indawo "Qeda" kuyoba kudingekile, thina lokuphikisa. Ngaphezu kwalokho, lo hero ithola omningi isipiliyoni. Ikhwalithi ehlukile neqanda yikhono layo teleport. Ukuze wenze lo msebenzi, kudingeka uchofoze ngakwesokudla inkinobho yegundane mshini. Ngokuzayo sihlela ukuyisebenzisela uhlelo olugcwele. Manje uyazi ukuthi ukuba acatshangelwe dragon egg.
Ordinary uju isikhonyane trehkolyuchkovaya: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Yini itches ikhwapha kwesokunxele: Izinganekwane amabika
Carp Bhaka kuhhavini in ucwecwe: zokupheka best izitsha ozithandayo
Tiger ikati - ukuthi isilo enjalo?